Ama-plugins we-WordPress we-WordPress: Ukuphatha netimu | Martech Zone
Ama-plugins we-WordPress we-WordPress: Ukuphatha netimu
NgoLwesine, July 2, 2009 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Kusukela ngibuyekeza ibhulogi yami futhi ngifaka I-WordPress ku-Amazon S3, Ngikwazile ukususa ama-plugins okulondolozwa kwesikhashana. Ama-plugins okulondolozwa kwesikhashana asebenze kabi uma kuqhathaniswa nokucindezela zonke izithombe zami ku-S3. (Ibhili yami yenyanga yokuqala: $ 0.50).
Ngiyabona ukuthi ukulondolozwa kwesikhashana kungakhama ukusebenza okwengeziwe kusayithi lami… kepha kungangivimba ekuvuseleleni isayithi ngokwezifiso ze-iPhone, iBlackberry, namanye amadivayisi eselula. Inkinga ukuthi isivakashi esisodwa singavakashela leli khasi kudivayisi ephathwa ngesandla, liyalondolozwa, bese umuntu olandelayo enikezwa uhlobo olufanayo oluphathwa ngesandla kusiphequluli sabo esigcwele. Ukulondolozwa kwesikhashana nezindikimba ezinamandla azihlangani kahle.
I-plugin yokuqala engiyitholile yokwenza kahle kahle izingqikithi zazo zombili i-iPhone, i-Blackberry, namanye amadivayisi aphathwayo yi I-WordPress Mobile Edition i-plugin.
Le plugin yasungulwa ngu Isixuku Esithandayo. Ngivivinye i-plugin ku-iPod Touch ne-Blackberry yami futhi ukubukwa kokubili kuyamangalisa. Kudos kubathuthukisi bale plugin yokwandisa ukubuka nokuzulazula kokubili kweSafari ku-iPhone noma i-iPod Touch kanye neBlackberry namanye amadivayisi.
Inothi elilodwa ekufakeni le-plugin, lidinga ukufaka okuhlukile kunama-plugins amaningi. Kufanele uqale ulayishe itimu kumkhombandlela wezindikimba, bese ulayisha bese wenza kusebenze i-plugin. Ngokujabulisayo, ababhali baze bakutshele uma uyifaka ngokungeyikho. 🙂
Ukuphathwa kwe-iPhone WordPress
Enye i-plugin ye-iPhone ethakazelisayo engithole ukuthi WPhone. I-WPhone empeleni ikuvumela ukuthi uphathe i-WordPress ngokuphelele ngaphakathi kwefayela le- Iphaneli yokuphatha elungiselelwe iSafari ku-iPhone noma i-iPod Touch. Kupholile impela!
Angiyifakanga le-plugin ngoba ngivame ukwenza 'ukucubungula' okuthuthukile ngalokhu engikuthumele, kepha nina bantu enifuna ubuhle be-iPhone WordPress, lokhu kubonakala kuyiplagin enhle!
Njengoba izinhlelo zokuphathwa kokuqukethwe ziqhubeka nokuvela, ngiyethemba ukuthi abathuthukisi bafaka isiphequluli seselula nokuhlanganiswa kwamadivayisi eselula njengengxenye yecebo labo. UCarl Weinschenk unendatshana enhle echaza izimpi zesiphequluli seselula ezizayo.
Njengoba i-Opera Mobile ilandwe izikhathi ezingaphezu kwezigidi ezingama-40 kanti i-iPhone manje ibala amaphesenti ayi-0.19 wokuphequlula emhlabeni wonke… ukwenziwa kweselula kuzoba yinzuzo enkulu yokuncintisana kungekudala!
Tags: I-plugin ye-iphoneiphone indaba ephathwayoI-wordpress adminisihloko se-wordpress
UJun 1, 2011 ngo-3: 46 AM
Leli sayithi ligcwele imininingwane ebalulekile kubathuthukisi bezinhlelo zokusebenza ze-iPhone nabasebenzisi. Nginesiqiniseko sokuthi iningi lalabo abavakashela leli sayithi bazolithanda futhi. Siyakuhalalisela umphathi nomnikazi walesi siza. Lokhu kuzonikeza imininingwane ethe xaxa yokuthuthukiswa komkhakha wama-iPhones.